सावधान फेसबुक म्यासेन्जरबाट फैलिँदैछ भाइरस – Setosurya
आइतबार २५, भदौ २०७४
काठमाडौँ । तपाईं फेसबुक च्याटमा रमाउनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् है । फेसबुक च्याट म्यासेन्जरमार्फत अहिले भाइरस र मालवेयर फैलिँदैछ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको म्यासेजिङ एप फेसबुक म्यासेन्जर मालवेयरको सिकार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
यी हुन ८ भाग्यमानी नेपाली, जो पृथ्वीको कुनै ठाँउ हैन मंगल ग्रह घुम्न छानिए
पर्वतमा निर्माणधिन मध्यमोदी जलविद्युत आयोजनाको शुरुङ निर्माण ५५ प्रतिशत सकियो, ०७५ असार मसान्तसम्ममा मात्रै उत्पादन
उपविजेता महिला क्रिकेटरलाई जनही २५ हजार दिने घोषणा
यी हुन काठमाडौँमा फ्रि वाइफाई राख्ने ठाउँहरु
के ओभरचार्ज गर्दा मोबाइलको ब्याट्री खत्तम हुन्छ ?
अनेरास्वबियूकाे अध्यक्षमा तामाङ र महरकाे यस्ताे तानातान !
बलात्कार मुद्दामा जेल बसेका ब्यक्ति कांग्रेस प्रदेशसभाका उम्मेदवार
यसरी ओरालो लाग्यो डा. बाबुरामको राजनीति : के होला अबको बाटो ?
अर्थमन्त्री बन्न एमालेमा यी ५ नेताको भिडन्त !
राप्रपाद्वारा संघर्षको घोषणाः हिन्दुराष्ट्रबारे संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्ने निर्णय
प्रचण्ड र देउवा को भेटघाट, के के भयो कुराकानी ?